Golaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka hadlay dhul balaarsiga dalka Kenya -
Golaha aqalka sare ee Soomaaliya oo ka hadlay dhul balaarsiga dalka Kenya
Waxaa maanta kulanka baarlamanka aqalka sare soo xaadirtay 30 Senetor, halka 24 kale ay ka maqnaayeen kal fadhigii maanta dhacay.
Waxaa halkaas laga soo jeediyay warbixin ku saabsan dhul balaarsiga ay dalka Kenya ay ka wado xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya ee dhanka Gobolka Gedo.
Senetor Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa waxaa uu sheegay in dhowaan ay gaareen degmadda Beledxaawo ee Gobolka Gedo, iyaga oo kamid ahaa wafdi la socday wasiirka arrimaha Gudaha ee xukuumadda Federaalka Soomaliya Cabdi Faraax Siciid Juxa iyo khubaro ku taqasusay arrimaha la xiriira dhulka.
Senetorka ayaa waxaa uu intaas ku daray in ay soo arkeen dhul boobka halkaas ka socda, loona baahan yahay in si deg deg ah wax looga qabto.
Waxaa dhanka kale kulankanii maanta lagu soo gaba gabeeyay kulamadii caadiga ay golahu u qabsan jireen, waxaana la sheegay in xaflad loo qaban doono xiritaanka iyo fasaxa ay golaha aqalka sare ay galayaan maalmaha soo socda.
Related Items:Featured, Golaha Aqalka sare oo Fasax Galay iyo War bixin laga Hor Akhriyay
Ciidanka Kenya oo galay deegaanka Ceel Qaalow
Safarka Madaxweynaha Soomaaliya iyo Magaalo xeebeedka ee Hobyo
Taabid oo Eng Yariisow hoygiisa Ugu Tagay Daawo
Dil Caawa ka Dhacay Muqdisho
Gudoomiyihii Xilka laga qaaday Muxuu kayiri Xil Ka Qaadistii
Faa-Faahin ka soo Baxday Qarax ka Dhacay Muqdisho Sawiro
Taabid iyo ku xigeenadiisa oo xilka laga qaaday iyo Mas,uuliyiin loo magacaabay Gobolka Banaadir Sawiro
Mas,uulka loobadinayo in uu bedelo Taabid
Gobolka Banaadir oo laga yaabo in Mas,uul Cusub loo Magacaabo iyo Taabid oo culeys lakulmay
Maxaabiis hor leh oo caawa laga soo dejiyey Muqdisho Sawiro
Fanaanka Khadar Keeyow oo cadeeyey in uu Guursaday Fanaanada Fartuun Birimo
Warar is khilaafsan oo ka soo baxaya weerarkii ka dhacay Shabeelada Dhexe
Duqeyn ka dhacday Shabeelada Dhexe
Taliye lagu Dilay Muqdisho
Qarax ka dhacay Degmada Dayniile
Ra,iisul wasaaraha Xukuumadda Federalka soomaliya oo Xilkii ka qaaday wasiiro kuwo Cusubna Magacaabay
Deegaanka Ceel Qaalow oo u dhow Ceel Waaq ee Gobolka Gedo ayaa waxaa lagu...
Wafdiga Madaxweynaha jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee uu ku marayo Gobolada Soomaaliya ayaa lafilayaa in...
Gudoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir ahaana Duqii Muqdisho ee Xilka laga qaaday Taabid Cabdi...